President-Elect Biden gale-force Intensity and Passion for Tourism seen by SKAL | Responsible Tourism News
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Editorial • Hawaii Travel News • Other • Olona manao vaovao • Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra • Vaovao momba ny dia any Thailandy • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Travel Wire News • News News
Ny filoham-pirenena voafidy Biden gale-force Intensity sy ny fitiavana ny fizahantany hitan'i SKAL
Home » Lahatsoratra » Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra » Ny filoham-pirenena voafidy Biden gale-force Intensity sy ny fitiavana ny fizahantany hitan'i SKAL
Ny tantara dia hampiseho amintsika ny fahasimbana na raha tsy izany, ny vanim-potoana Trump dia nanjary am-po sy fanahy tsy an'i Amerika ihany fa an'izao tontolo izao.
Andrew Wood dia mpandray anjara eTurboNews ary monina ao Bangkok, Thailand. Ity ny valinteniny sy ny heviny momba ny valim-pifidianana tany Etazonia.
Ho an'ireo mpamaky an'ity habaka ity dia ho fantany fa manandrana tsy manao fanambarana ampahibemaso marobe aho. Ny fiofananay SK hasL dia nampianatra ahy hanana fahaiza-misaina, hihaino, tsy hanao politika, hanaiky ny loko, ny finoana ary ny fivavahana rehetra. Ny fahasamihafana dia ampahany amin'ny fiainantsika ary matetika tsy amin'ny alalàn'ny safidintsika, fa zavatra iray izay nahaterahantsika ary ambonin'ireo fampiofanana sy traikefa ananako dia nampianatra ahy haneho finamanana sy fanajana.
Ny habaka ampahibemiko, ao amin'ny Facebook manokana, dia feno sombim-piainako isan'andro toy ny hoe mpikambana ao amin'ny fianakaviako ianao, ilay mpamaky. Izaho koa mizara ny asa soratro sy lahatsoratra miampy ny vaovao sy ny hevitra izay nahasarika ny saiko.
Mpamaky mazoto aho. Amin'ny maha-boky kely an'i Enid Blyton's Famous Five, tantara an-tsary toa an'i Beano sy tantara momba ny hetsika sy ny traikefa nahafinaritra toa ny Guns of Navarone (Alistair MacLean). Tamin'ny 11 taona aho dia nahita ny trano famakiam-boky nosoratan'ny raikeliko ary namaky ny antsasak'izy ireo tao anatin'izay taona vitsivitsy ho avy.
Androany ny fahalianako dia ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany ary manoratra amin'ny famoahana lahatsoratra elektronika malaza isan'andro aho. Mandany ora maromaro amin'ny fizahana azy rehetra aho. Raha misy manintona ny masoko dia zaraiko matetika amin'ny sehatra samihafa sy ny vondrona media sosialy izany.
Ny fahitako ny zavatra hozaraina dia ny fahalianako, mpikarakara hotely asa sy mpitantana trano fandraisam-bahiny, Skålleague, ary mpanoratra sy mpitsikera ankehitriny izay mahatratra 3 tapitrisa eo ho eo ny mpamaky manerantany.
Ao amin'ny bilaogiko manokana raha mahatsapa fatratra izay olana rehetra aho dia hojereko miaraka amin'ny AJW Comment ilay lahatsoratra: Nandritra ny fiadidian'i Trump dia mety ho hitan'ireo mpamaky tsy tapaka ny toerako ny tena fahatsapako momba ilay lehilahy. Ny tena miharihary dia ny tsy naha-anti-panjakana fanjakana amerika nandritra ny 4 taona lasa.
Ny kabary fandresen'ny filoha voafidin'i Biden dia rivotra madio. Raha ny marina dia tafio-drivotra mahery. Natolotra tamin'ny alalàn'ny herin'ny hery sy ny fientanam-po, miaraka amina tsipika fahatsiarovana tsy hay hadinoina sy mampiakatra. Izay tena ilaintsika dieny izao.
Nampitambatra ny kabarin'i Biden ary naneho fahaiza-mitarika sy fahatokisana lehibe, afaka mahatsapa ho reharehan'ny firenena azy io ny solontenan'ny be taona indrindra.
Na dia tsy vaovao aza ny atiny rehetra, marina tokoa fa “Tsy fahavalo isika fa mpinamana,…” dia sombintsombiny tamin'ny lahateny fanokafana voalohany nataon'ny filoha Lincoln tamin'ny taona 1861. Na izany aza, ny kabarin'ny filoha voafidy rehetra Biden no tena nampiseho ny 'filoham-pirenena'.
Ary ho an'ny dia sy fizahan-tany? Ny USA manana handresy ny adiny amin'ny virus hamerenana amin'ny laoniny. Ny fikarakarana covid no laharam-pahamehany voalohany ary ny fametrahana paikadim-pirenena sy ny tena mpitarika ao amin'ny White House. Biden dia handray azy tsara ary hahazo azy ny ekipa A, tsy misy fanelingelenana. Ilaina ny fanapahan-kevitra henjana.
Raha vantany vao nokapohina ny viriosy dia afaka sitrana sy hambinina ny tontolon'ny dia.